Malikni Urduun biyyi isaa labsii Ameerikaan Alquds irratt baafte kan hin fudhanne tahuu itti aanaa prezdaantii Ameerikaatiif beeksise. - NuuralHudaa
Malikni Urduun biyyi isaa labsii Ameerikaan Alquds irratt baafte kan hin fudhanne tahuu itti aanaa prezdaantii Ameerikaatiif beeksise.
Itti aanaan prezdaantii Ameerikaa Maayik Peens daaw’annaa biyyoota Baha jiddu galaa keessatti jalqabeen Ganama har’aa Kaayiroo keessatti prezdaantii Masrii waliin eega mari’atee booda gara Urduun kan imale yoo tahu, Magaalaa Ammaan keessatti Malik Abdullaah waliin kan mari’ate tahuu gabaasni arganne ni mul’isa.
Malik Abdullah Bin Huseen “labsii Traamp Alquds/Jerusalem magaalaa guddoo Isra’eel” jechuun labse Urduun hin fudhattu; Alqudsi magaalaa guddoo Falasxiin jechuun”itti aanaa prezdaantii Ameerikaatiif hime.
Maayik peens daaw’annaa isaa kana itti fufuudhaan galgala hardhaa Isra’eel kan seenu tahuun beekameera.
May 19, 2022 sa;aa 5:52 pm Update tahe